Tangres စက်မှု Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
။ Tangres Industiral, LTD "- Foshan ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်ကြွေစီးတီး" တွင်တည်ရှိသည်, 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ တည်ထောင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ "တဦးတည်းနှလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နှင့်ရိုးသားမှုနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုအနိုင်ရရှိမှု" ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသီအိုရီအခိုင်အမာသိရသည်။ စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲတွေမှတဆင့်ကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ-စကေးနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီသို့ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
စီးပွားရေးနယ်ပယ်အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း, အရောင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပို့ကုန်များအတွက်အေးဂျင့်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလည်းဒါကြောင့်ကျနော်တို့ client များသည်အကောင်းဆုံးသမုဒ္ဒရာကုန်တင်ရဖို့ကူညီနိုင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူအလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြွေကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, ကုမ္ပဏီလျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုး, နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ရောင်းချမှုအင်တုံ, 3D ကော်ဇော tile ကိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပကောင်းစွာရောင်းဆေး, ကြွေထည်ပစ္စည်းအုပ်ကြွပ်နှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီလသံမဏိနယ်စပ်သံမဏိမီးဖိုချောင်စုပ်တိုးပွားလာစောင့်ရှောက် တိုင်းပြည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားဖောက်သည်ထံမှချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မြင့်မားသောထောမအနိုင်ရတဲ့။
ကုမ္ပဏီကောင်းသောန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူချွန်ထက်ပြိုင်ဆိုင်မှုထိုသို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေက၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ခေတ်မှီထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစားသုံးသူစိတ်အားကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဈေးကွက်အနိုင်ရ, ကောင်းသောထုတ်ကုန်အတူတကွဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီနေ့ရဲ့ Tangres အောင်မြင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကောင်းသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာရှိပြီးအလွန်အားထုတ်ခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုဂ္ဂိုလ်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်ထုတ်ကုန်အသိပညာရှိသည်။ အော်ပရေတာသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းကိုခံယူနှင့်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကသတ်မှတ်သောအင်္ဂလိပ်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်နှင့်အစိုးရသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအထူးကုအရည်အချင်းလက်မှတ်ရရှိရန်။
Tangres အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်စျေးကွက်အပြောင်းအလဲမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်,! စုံလင်ခြင်းမှီဖို့အဆက်မပြတ်တိုးတက်စေူခင်း! တိုင်းလေးစားမှု၌အကြှနျုပျတို့၏ client များကျေနပ်အောင်, ငါတို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေ!